RASMI: Manchester United oo ku dhowaaqday laacibka ugu wanaagsan kooxdeeda xilli ciyaareedkan 2020-21… (Yaa ku guuleystay?) – Gool FM
Haaruun May 18, 2021
(Manchester) 18 Maajo 2021. Kaddib codeyn ay Manchester United ku hordhigtay taageerayaasheeda inay doortaan xiddiga ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan ayaa ay jamaahiirtu ku doorteen laacibka ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan 2020-21.
Laacibka khadka dhexe ee Bruno Fernandes ayaa ku guuleystay xiddigaha ugu wanaagsan kooxda Manchester United xilli ciyaareedkii labaad oo xiriir ah.
Taageerayaasha Man United ayaa u codeeeyey in xiddigan xulka qaranka Portugal uu yahay kii ugu wanaagsanaa koxoda xilli ciyaareedkan, inkastoo ay jireen ciyaartoyd bandhig wacan sameeyey fasal ciyaareedkan.
Fernandes ayaa helay 63 boqolkiiba (63%) codadkii la dhiibtay kaddib markii uu xilli ciyaareedkan dhaliyey 28 gool, isla markaana uu caawiye ka ahaa 17 gool oo kale tartammada oo dhan.
Luke Shaw oo bandhig ilqabad leh soo bandhigay xilli ciyaareedkan oo ahaa kii ugu fiicnaa ee uu xirto maaliyadda Man Utd ayaa kaalinta labaad ka so galay codeynta laga qaaday taageerayaasha Manchester United ee laacibkii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan.
Edinson Cavani oo ka mid ahaa saxiixyada ay xagaaga la timid koxoda ayaa kaalinta saddexaad oo tiigsaday kaddib markii uu waqti wacan ku qaatay garoonka Old Trafford.
Mason Greenwood oo todobaadyadii la soo dhaafay bandhig cajiib ah sameeyay ayaa waxaa agu abaal-mariyay inuu ka soo muuqday kaalinta afaraad.
Fernandes ayaa rajaynaya in abaal-marintan uu ku guuleystay ay ka caawiso inuu gool kale dhaliyo ama caawiyo kulanka caawa ee ay ka horjeedaan Fulham.